Soanierana Ivongo : adala namono zaza niharan’ny fitsaram-bahoaka | NewsMada
Soanierana Ivongo : adala namono zaza niharan’ny fitsaram-bahoaka
Lehilahy iray voalazan’ny olona fa adala no matin’ny fitsaram-bahoaka tany Soanierana Ivongo, omaly antoandro. Niharan’ny daroka ary tsy namelan’ny olona raha tsy maty izy io. Araka ny fanazavana azo, omaly tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro, nandeha teny an-tsena ilay lehilahy io nitondra antsibe. Nifanena tamina vehivavy iray sy ny zananikely vao herintaona sy tapany ilay lehilahy voatondro ho adala ka nokapainy ilay antsibe ny lohan’ilay zaza. Nizara roa mihitsy ny lohany ary maty tsy tra-drano izy io.
Nahita izany ny olona ka tezitra ary nikaroka ity lehilahy ity. Tsy namelan’ny olona izy io raha tsy tratrany ary izao niharan’ny fitsaram-bahoaka izao. Tsy nisy azon’ny mpitandro filaminana natao. Efa am-pelatanan’ny distrika ny razana ary misokatra ny fanadihadiana.
Toe-javatra mampalahelo kanefa zava-misy eto amin’ny fiarahamonina amin’izao fotoana izao ny fahamaroan’ny adala mirenireny. Mety hampidi-doza, tahaka ity tany Soanierana Ivongo ity, izany ka miandry izay fepetra raisin’ny tompon’andraikitra amin’ireny, na ny fianakaviany.